Redmi K20 agaghị eme na-enweghị 3.5 mm Jack jack | Gam akporosis
Redmi K20 agaghị eme na-enweghị 3.5mm jack jack
Enweelarị ọtụtụ smartphones ndị gbahapụla njikọ njikọta nke 3.5 mm. Nke a, karịa ịbụ ụdị ọganihu, abụrụla onye na-eweta iwe maka ọtụtụ ndị ọrụ, ndị ka na-ahụghị onwe ha n'ụwa na-enweghị atụmatụ a. Mana, na nkasi obi ha, ọ dị ka nnukwu njedebe.
El Xiaomi My A2 bụ ufọt ufọt nso nke kwuru goodbye na-ewu ewu ọdịyo Jack, ka ihe atụ, mgbe nke abụọ na ọgbọ nke atọ Pixem si Google kwa, na mgbakwunye na ụdị ndị ọzọ sitere na ndị nrụpụta ndị ọzọ. O sina dị, el Redmi K20 ọ gaghị agbaso usoro a pụtara ìhè, ebe ọ ga - eji njiri egwu ọdịyo 3.5 mm.
Ihe olile anya gbara gburugburu igba egbe nke ngwaọrụ ọzọ site na Redmi, ụlọ ọrụ kwụụrụ onwe nke Xiaomi na Jenụwarị nke afọ a, dị elu nke ukwuu, ma karịa Ọ bụ ezigbo Lu Weibing, onye isi oche nke Redmi, bụ onye kwadoro mmejuputa nke jaket ọdịyo na Redmi K20, que Ọ ga-onwem na a trplie azụ igwefoto y ọgbọ 7th na ngosipụta mkpịsị aka mkpịsị aka.
3.5mm jack audio connector confirm for Redmi K20 site n'aka Lu Weibing
Ọ na-ekwu na ụlọ ọrụ ahụ kpebiri ijigide ụda ọdịyo 3,5mm dị ka ndị na-akwado ya. Site na nsonaazụ ụda nke ụda ampilifaya Mi, nke bụ ụlọ ọrụ nke aka ya, ngwaọrụ ga - eme ka ụda olu dị elu dị elu, nke tinyekwara usoro asambodo nnukwu mkpebi.
Ya mere, jaak a mobile agaghị a ot otu, ma otu nke dị mma nke ga-enye ụda doro anya ma sie ike, dịka anyị nwekwara ike ikwenye na mbipụta nke CEO na netwọkụ mmekọrịta ndị China. May 28, nke bu ụbọchị nke mmalite ya, anyị ga-anụ maka nke a ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Redmi K20 agaghị eme na-enweghị 3.5mm jack jack
Samsung Cloud ga-ebelata ebe nchekwa n'efu na 15 GB na 5 GB